बलात्करीलाई पत्र – मझेरी डट कम
हेर, बलात्कारी आज तलाई किन यसो लेख्दैछु सुन्दै जा । कान भए पनि बहिरो नबनेस् । आँखा भए पनि अन्धो नबनेस् । आँखा नदेख्नेहरू कान नसुन्नेहरू कति सभ्य हुन्छन् तलाई थाहाँ छैन होला । तर तेरा दुवै आँखा कान भए पनि त कति असभ्य छस है ? छि छि …. मैले तलाई लेखेका शब्दहरू नै दुर्घ्न्धित हुन्छन् होला ।